ကမ္ဘာ့အပူပိုင်းမိုးသစ်တောအမြောက်အများသည် intertropical convergence zone ဟုလည်း သိသော monsoon trough နေရာတွင် တည်ရှိသည်။ အပူပိုင်း စိုစွတ်တောများ၏ ပိုကျယ်ပြန့်သော အပိုင်းသည် တောင်ယဉ်စွန်းတန်းနှင့် မြောက်ယဉ်စွန်းတန်းကြား အီကွေတာဇုံတွင် တည်ရှိသည်။ အပူပိုင်းမိုးသစ်တောများသည် အရှေ့တောင်အာရှတွင် မြန်မာမှသည် ဖိလစ်ပိုင်၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ပါပူအာနယူးဂီနီ၊ သီရိလင်္ကာထိ၊ ဆာဟာရ အာဖရိက တိုက်ငယ်တွင် ကင်မရွန်းမှသည် ကွန်ဂို (ကွန်ဂိုမိုးသစ်တော)ထိ၊ တောင်အမေရိက (ဥပမာ၊ အမေဇုန် မိုးသစ်တော)၊ ဗဟိုအမေရိကန် (ဥပမာ၊ ဘော့ဆဝါ့၊ ယုကတန်ကျွန်းဆွယ်တောင်ပိုင်း-အဲလ်ပီတင်-ဘဲလစ်-ကလတ်မျူး)၊ ဩစတြေးလျနှင့် ပစိဖိတ်ကျွန်းအများစု(ဟာဝိုင်အီ အိုခိနာအိ ကဲ့သို့သော) ကျွန်းများပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် အလင်းမှီစုအစာဖွဲ့စည်းခြင်းထက် အသားတင် အောက်ဆီဂျင် အနည်းငယ်ကို လေထုထဲ အပိုဆောင်း ထုတ်‌လွှင့်ကြောင်း သိသော်လည်း၊ အပူပိုင်းမိုးသစ်တောများကို "မြေကမ္ဘာ၏ အဆုတ်များဟု ခေါ်လာခဲ့ကြသည်။
စံအားဖြင့် အပူပိုင်းမိုးသစ်တောတခုတွင် အလွှာများစွာ ရှိပြီး၊ တလွှာစီတွင် ဘဝရှင်သန်ရေးအတွက် ယင်းအလွှာပေါ် မှီခိုနေသော အပင်နှင့် တိရိစ္ဆာန်အမျိုးမျိုး ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် အကြမ်းဖျင်းခွဲလျှင်
↑ Grida.no (PDF)။ 2012-08-26 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Amazonian forest dieback under climate-carbon cycle projections for the 21st century" (2004). Theoretical and Applied Climatology 78: 137. doi:10.1007/s00704-004-0049-4. Bibcode: 2004ThApC..78..137C.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မိုးသစ်တော&oldid=632389" မှ ရယူရန်
၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၂၂:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၂၂:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။